Looma soo dejin karo .ova gudaha Virtualbox (Xalka) | Laga soo bilaabo Linux
Lama soo dhoofsan karo .ova-ga Virtualbox (Xalka)
Maalmihii la soo dhaafay waxaan ka soo saaray casiirkii adeegsiga iyadoo la adeegsanayo Virtualbox, maaddaama aan si toos ah ugu fulinayo softiweer mashiinnada dalwaddii oo markaa loo wareejiyo adeegeyaasha ugu dambeeya ama bey'adaha horumarka, tan oo dhan ujeedkeedu yahay bixinta xalalka si fudud ugu baahan in la soo galiyo Virtualbox si dhakhso leh loogu isticmaalo. Runtii tani waa fikrad ay dadku ka yimaadeen TurnKey LinuxAnigu shaqsiyan waan bartay qaabkan wax loo qaybiyo waxaanan filayaa inay umuuqato mid waxtar badan.
Waxyaabo badan oo la soo dhoofiyay iyo kuwa la dhoofiyay ee mashiinno dalwaddii ah, waxaan dhibaato ku qabay mid ka mid ah kombiyuutarada martida waana taas ma oggolaan in la soo dajiyo .ova-ka Virtualbox, wax aad u xiiso badan maxaa yeelay isku mid ah .ova ayaa laga soo waaridi karaa kombuyuutar kale oo isla noocaas ah. Weli ma aqaan asalka dhibaatada, laakiin haddii aan xal u helo si aan u adeegsado .ova su'aasha ah dhib la'aan, tillaabooyinku waa sahlan yihiin waana la wadaagi doonaa xagga hoose.
Xalka dhibaatada Soodajinta faylka ova ee Virtualbox
Waa inaan cadeeyo taas habkani ma ogola in la soo dejiyo faylalka Ova ee khariban, sidaa darteed haddii ay dhacdo in sanduuqaaga kumbuyuutarka uusan u oggolaanayn soo dejinta sababtoo ah feylku ma dhammaystirnayn ama dhibaato xagga nuqul ah ayaa kaa haysata, habkani ma shaqeyn doono halkan hubi in faylkaaga .ova uu si sax ah u shaqeeyo.
Haddii markii aad soodejineyso qalab macquul ah sanduuqa kumbuyuutarka aad hesho fariin qalad ah sida midda ku jirta sawirka soo socda, habka laga hadlayo ayaa laga yaabaa inuu xalliyo dhibaatadaada
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ka furno terminal galka halka faylka asalka ah .ova uu ku yaalo, ka dib waxaan fulinaa amarka soo socda si aan u kala qaadno .ova meesha aan doorbidno.
Amarkani wuxuu soo saaraa saddexda feylood ee ova ka kooban yahay: the .vmdk, .ovf iyo .mf, feylka na xiisaynaya ayaa ah VMDK (.vmdk) (Virtual Machine Disk) oo ah midka ay ku jiraan macluumaadka diskiga ee ku jira qalabkaaga farsamada.
Waxa xiga ee ay tahay inaan sameyno waa inaan u tagno Virtualbox oo aan abuurno mashiin dalwad cusub oo leh qaabeyn isku mid ah kii asalka ahaa, taas oo ah, isla qaab dhismeedka iyo nidaamka qalliinka, marka lagu daro xaddiga wan ee aan dooneyno inaan adeegsanno, ugu dambeyn waa inaan doorannaa inaan adeegsanno a faylka disk adag ee dalwaddii jira oo xulo .vmdk kii aan soo dejinay tillaabadii hore.
Ugu dambeyntiina, waxaan abuurnaa mashiinka casriga ah waxaanna ku socon karnaa jawiga suubban dhibaato la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Lama soo dhoofsan karo .ova-ga Virtualbox (Xalka)
Amarkani waxba ma sameeyo, ama ma ogi haddii aan qalad ku samaynayo, way caawinaysaa
Ku jawaab Ludwing
Maxaan uga doorbidnaa qadka amarka GUI-yada?
OPMon: Ciyaar Cajiib ah oo Pokemon-dhiirigelin u ah Linux